Degso DAEMON Tools Lite 10.13 loogu talagalay Windows
Madal: Windows Nooca: 10.13 Luqadda: English
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (0.66 MB)
Degso DAEMON Tools Lite,
DAEMON Tools Lite waa barnaamij kumbuyuutar abuuris bilaash ah oo aad si fudud ugu furi karto faylasha sawirada leh ISO, BIN, CUE kordhinta adigoo abuuraya saxanno dalwad ah. DAEMON Tools Lite waa softiweer bilaash ah oo la isku halleyn karo oo u saamaxaya dadka isticmaala inay si deg deg ah oo fudud ugu abuuraan saxannada dhijitaalka ah (wadayaasha) kumbuyuutarkooda. Adiga oo kaashanaya saxannada dhijitaalka ah ee aad abuuri doonto, waxaad si toos ah u isticmaali kartaa CD-yada iyo DVD-yada aad horay u keydisay sida sawirada.DEMON Tools Lite waxay taageertaa dhammaan fidinta caanka ah sida CCD, BWT, MDS, CDI, NRG, PDI, B5T, CUE, BIN, ISO iyo ISZ.
Waxaad fursad u leedahay inaad si fudud ugu ciyaarto feylasha muuqaalka ee la abuuray iyadoo la kaashanayo barnaamijyo kala duwan sida Magic ISO ama Power ISO.Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad dooratid feylasha muuqaalka ah ee kujira diskigaaga adag oo aad dul saartid kumbuyuutarrada kumbuyuutareedka aad abuurtay adoo kaashanaya qalabka DAEMON Tools Lite. saarista saxannada daljirka ah iyo habab kale oo badan si dhakhso leh ayaad uga dhigi kartaa inay dhacdo.
Sidee DAEMON Tools Lite u shaqeeyaa?
Iyada oo gacan ka heleysa barnaamij kuu oggolaanaya inaad sameysato feylal sawir kuu gaar ah oo aad ku isticmaali karto saxannada teknolojiyada, sidoo kalena aad abuureysid saxarro teknolojiyad ah oo aad adeegsan karto saxannada casriga ah; Waxaad ku keydin kartaa xogta CD-gaaga / DVD / Blu-ray saxaradaada kumbuyuutarkaaga sida faylasha sawirada leh kordhinta ISO, MDS, MDF iyo MDX.
DAEMON Tools Lite, oo kuu saamaxaysa inaad sameysid 4 darawal oo kumbuyuutareed ah, waxay buuxisaa baahiyaha caadiga ah isticmaale kumbuyuutar. Barnaamijka, oo u shaqeeya si wada jir ah dhammaan CD-yada iyo DVD-yada, wuxuu dhammaystiraa habka beddelaadda iyada oo aan wax dhibaato ah laga eegin habka ilaalinta ee CD-yada iyo DVD-yada marka aad rabto inaad sameysato feylal sawir kuu gaar ah. barnaamijyada abuurka disc ee suuqaDAEMON Tools Lite waa mid kamid ah softiweerka ay hubaal tahay inaad doorbideyso inaad abuurto darawallo kumbuyuutareed iyo feylashaada sawirka.
DAEMON Tools Lite Noocyada
Cabirka Faylka: 0.66 MB
Horumar: Disc Soft
Wararkii Ugu Dambeeyay: 05-04-2021